Warshadda Suunka Telefoonka ee Shiinaha iyo soo -saareyaasha | SJJ
Hal-abuur aad u sarreeya, shaqooyin badan leh, ku habboon oo casri ah oo loogu talagalay taleefannadaada gacanta. Iyada oo hal taleefan oo suunka gadaashiisa ah, waa mid aamin ah oo adag in aad gacmahaaga xoreyn karto adigoon ka walwalin inaad taleefankaaga mar kale iska tuurto. Silicone -ka taleefanka gacanta ee gadaasha gadaashiisa ayaa ah deeq weyn oo lagu hormarinayo ganacsigaaga.
Hal-abuur aad u sarreeya, shaqooyin badan leh, ku habboon oo casri ah oo loogu talagalay taleefannadaada gacanta. Iyada oo hal taleefan oo suunka gadaashiisa ah, waa mid aamin ah oo adag in aad gacmahaaga xoreyn karto adigoon ka walwalin inaad taleefankaaga mar kale iska tuurto. Silicone -ka taleefanka gacanta ee gadaasha gadaashiisa ayaa si weyn loo siiyaa si kor loogu qaado ganacsigaaga.
Maaddada silikoon ee heerka sare waxay bixisaa nolol dheer oo dheer iyo xayaysiis waara
Si ammaan ah u hay taleefankaaga hore, ku habboon in lagu kaydiyo kaarka deynta, lacag caddaan ah iyo kaarka magaca ganacsiga.
Suunka dhabarku wuxuu ku darayaa taleefoon gacantaada oo ka ilaaliya inay siibato & siibato, wuxuuna ka ilaaliyaa xoqista dusha sare ee dhammaan bogagga.
Laba Nooc: Iyada oo ay ku jirto bacda kaadhka iyo qalabka dhejiska ah ee balaastigga ah, oo aan lahayn kiish iyo qalab
Astaanta daabacaadda ee gaarka ah waxaa lagu dari karaa caaryada jirta.
Hore: Taleefanka Anti-Slip Pad Mat
Xiga: Qurxinta looxa, Calaamadaha iyo kuwa kale
Laablayaal Aluminiumka Istaaga
Dadka haysta Taleefanka Aluminiumka